7 ခရီးစဉ်မှာတော့ဥရောပရန်အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ခရီးစဉ်မှာတော့ဥရောပရန်အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး
ဥရောပ, ဘုန်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ၏လှပသောမြေယာခြောတစ်သွားလာရင်းမှဦးတည်ရာအဘို့ဖြစ်၏ နေ့စဉ်ခရီးသွားအဲဒီမှာအထဲကစိတ်အားထက်သန်. အဆမဲ့ကွောကျရှံ့အလည်အပတ်ခရီးနေရာနိုးထမှုနှင့်အတူ, ဥရောပဖြစ်ပါသည် ပြည်ပမှာလှပတဦးဖြစ်လူသိများ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်လေ့လာမှုအချက်အချာ အဖြစ်ကမ်းခြေတစ်ခု uncountable ကျေးဇူးရှိ, ကျွန်းများ, ဘုံဗိမာန်, ရဲတိုက်, နှင့်သမိုင်းအထိမ်းအမှတ.
မှတဆင့် voyaging စဉ်ခြောရောမမြို့နှင့်ပဲရစ်နဲ့တူမြို့မဖြစ်မနေအလည်အပတ်ခရီးမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည် ဥရောပ, ဒါပေမယ့်သင်ကစူးစမ်းလေ့ရှိသောသူတို့သည်ထိုလူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင် အပြောင်လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံးသိနှင့်ဂုဏ်အသရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအောင်စ relishing ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်, ဤစာရင်းတွင်မယ့်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်!
သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူ, ယင်းချဉ်းမှတလျှောက်ဖတ်ပါ7ဖြစ်ကြောင်းဥရောပတိုက်တွင်သောအရပ်တို့ကိုနားလည် ကအရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့ နှင့်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်ကို adrenaline အလုအယက်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်.
1. အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး – Valletta, မော်လ်တာ
Valletta ကမ္ဘာ၏အသေးဆုံးပြောင် Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံးမြို့ကြီးများအကြားဖြစ်ပြီးမှနေရာဖြစ်သည် တော်ဝင်ဘုံဗိမာန်, မြေရိုးကို, နှင့် 16 ရာစုမှ Cathedral နေ့စွဲပြန်ကြောင်း. ဤမြို့သည်လုံးဝတစ်ကမ္ဘာ့ဖလားဖြစ်ပါသည် အမွေအနှစ်ဆိုက်ကိုကကျင်းပခဲ့သောသမိုင်းသဘောထား၏ရလဒ်အဖြစ်အကြီးအဓိပ်ပာယျ၏အဖြစ်
က. Valletta ရှာဖွေစူးစမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဧရိယာတဝိုက် maneuvering ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါကျွန်းဆွယ်သည်အတိုင်းပြုပါရန်မရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းတာဝန်လုံးဝအပေါ်ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အသေးစားလုံလောက်ပါတယ် ခြေလျင်. ဘယ်တော့မှလွဲချော်ဖို့တချို့ကအကြီးအမြင်ကွင်းများ Valletta အတွက်အထက်ပိုင်း Barrakka နေစဉ် သင်တို့အဘို့အသေခံမည်ဟုအမြင်များကိုသိမ်းယူကြောင်းဥယျာဉ်နှင့် CASA Rocca Piccola!
2. Salzburg, သြစတြီးယား
Salzburg ဂျာမဏီ၏နယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်, သြစတြီးယား၏တိုင်းပြည်၌တည်၏, နှင့်နေသည် အမှန်မျက်စိတစ်မျက်မှောက်သောကြီးမားအရှေ့အဲလ်ပ်တောင်တန်းတို့က cuddled. ဤ အံ့ဘွယ်သောနှင့်အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံးမြို့မိုဇတ်၏မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါကျော်ကြားတဲ့ဂီတတေးရေးဆရာ, အဘယ်သူ၏
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတူရိယာပြတိုက်အတွက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ပြသနေကြသည်. အပြင်က၎င်း၏ကနေ သမိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျ, မြို့တော်ဘားရို့နှင့်အတူအလှဆင် style အမျိုးမျိုးဗိသုကာ - တစ်ဦး သာမန်ထက် 17 ရာစုအစောပိုင်းမှသည်စတိုင်နှင့် Salzach မြစ်အားဖြင့်ကွဲပြား, သောဤမြို့သည်အချိန်ခရီးသွားလာရောက်လည်ပတ်စေသည် အလယ်ခေတ်အသက်အရွယ်!
Salzburg ရထားမှ Graz
Salzburg ရထားမှ Linz
3. Constanta, ရိုမေးနီးယား
တစ်ခေတ်နောက်ကျမြို့တစ်ချိန်ကဘာ, Constanta သည်လက်ရှိတွင်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည် မြို့နှင့်ဥရောပ၌အငယ်ဆုံးလူသိများလှပသောနေရာများ, နှင့်ပင်လယ်နက်၏အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိသည်ဆူညံဆိပ်ကမ်း.
Constanta မြောက်မြားစွာသက်သေမှနေရာဖြစ်သည် ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ ဆယ်ဘို့တဘို့ကိုပြန်မယ့် ရာစု, အဆိုပါ Ovid ရင်ပြင်အပါအဝင်, ရောမအနုပညာရှင်၏ရှိရာကြေးဝါရုပ်တု Ovid ရပ်တည်ချက်, နှင့် relinquished Constanta ကာစီနို, အရာအနုပညာများ၏ဗိသုကာ features Noveau. Constanta ထိုနည်းတူဖြစ်ကောင်းအများဆုံးကြည်နူးဖွယ်သမုဒ္ဒရာရှိပါတယ်, ဘယ်မှာသင်လိမ့်မည် နေပူထဲမှအခွင့်အလမ်းရဖို့နဲ့တက်လျှော့ပေးရေး. အမှု၌သင်တို့တစ်ဦးစွန့်စား၌ရှိကြ၏ စိတ်နေသဘောထား, ရှိပါတယ် ရက်ပေါင်းများစွာခရီးများ Constanta ထံမှ, နှစ်ခုသွားရောက်ခြင်းများပါဝင်သည်အရာ ယူနက်စကိုအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များ တစ်ဦးမှာအဆုံးဆီသို့ဦးတည်လျှော့ပေါ့နှင့်အတူအမည်ရညုနှင့် Tulcea နာမည်ကျော်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း, Mangalia.
4. အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး – ဂျန့်မြို့မှာ, ဘယ်လ်ဂျီယံ
တူသောအပေါငျးတို့သပိုပြီးသိသာဘယ်လ်ဂျီယံမြို့ပြလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အရိပ်အောက်မှာ Hidden Antwerp နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်, ဂျန့်မြို့မှာဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြို့များနှင့် ဝေးလျော့နည်းရောဂါ, ဂျန့်မြို့မှာသင်သည်သက်သာခံစားရစေရန်လုံလောက်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံတက်မြိန်မှကြီးမားအလုံအလောက်. သငျသညျတော်တော်လေးပြတိုက်၏ဝါသနာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ခေတ်မှီဘား, နှင့်တူးမြောင်းဘက်အမြင်များ, သငျသညျကျိန်းသေသင့်ရဲ့ခရီးသွားမှဂျန့်မြို့မှာထည့်သွင်းဖို့လိုပေမည် ခရီးစဉ်. လျစ်လျူရှုခံရဖို့မပေးအပ်သောသောနေရာများကိုတစ်ဦးသောအဘို့ကို Gravensteen ပါဝင်သည်, တူးမြောင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူဆယ်ဘို့တဘို့ရာစုအိမ်ကြီး, Ghent ၏ Belfry, ပြီးနောက် စိန့် Baroness ဘုရားရှိခိုးကျောင်း.
အဆိုပါ Ravel နေဖြင့်စိတ်ဝင်စားခံရဖို့အဆင်သင့် Get အချိန်ရထားရပ်နေကြ၏မူကြောင်းကိုအခြေခံအဆောက်အဦများ နှင့်သင့်ကင်မရာဥရောပ၌အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး၏ဤရွေးဘို့ဆင်း buckle အောင်.
5. ဟယ်လ်စင်ကီ, ဖင်လန်
ဘောလ်တစ်၏နယ်နိမိတ်မှာ Stashed, ဟယ်လ်စင်ကီခံထိုက်ပေ၏တဲ့ဥရောပမြို့ဖြစ်၏ ရှာဖွေရေး. ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူလျှံ, ဟယ်လ်စင်ကီကမ္ဘာ့ဗိသုကာခဲ့သည် အဘို့မြို့တော် 2012. သူတို့ရဲ့စတိုင်လ်ခြီးမှမျးဒါဖြစ်ပါသည်, ကြောက်ဖြစ်နှင့် strolling join ဖို့မကြိုးစား ဖင်လန်နိုင်ငံမြို့တော်ဒကြွယ်ဝသောသမိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့မြို့လယ်ဧရိယာတစ်ဝိုက်လည်ပတ်မှု.
ယင်း၏အစဉ်မပြတ်နေစဉ်အတွင်းဟယ်လ်စင်ကီသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့စဉ်းစားပါ နွေရာသီရက်ပေါင်း အဲဒီမှာသင်၏အချိန်မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ်သင့် gutsy ဘွတ်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်စောင်ကိုဆောင်းတွင်းညနေခင်းကိုစစ်တိုက်ခြင်း. ဘယ်ကိစ္စမဆို, ကြည့်ဖို့မြင်ကွင်းများ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားနံပါတ်များရှိပါတယ်, သငျသညျထို option ရှိသည်မည်မဟုတ် လုံးဝ လျှို့ဝှက်ချက်တိုင်းကိုထုတ်ဖေါ်ပါ ဒါကြောင့်ရရှိထားသူ!
6. ဂို, ဆွီဒင်
ဂို, ဆွီဒင်တွင်တည်ရှိသည်, Liseberg အပန်းဖြေပန်းခြံမှနေရာဖြစ်သည်, မှတစ်ခုဖြစ်သော တညျးဟူသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုသော်ငြားထိုလူမျိုးထဲတွင်ထိပ်ဆုံးဆွဲဆောင်မှု. ဒါဟာဖြစ်သောလည်းတိုင်းပြည်အတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၏ မြေနှင့်ပင်လယ်နှစ်ခုလုံး၏၎င်း၏နိုင်အောင်နှင့်၎င်း၏မတူကွဲပြားကြောင့် amusing ကျော်လွန် "Fika" ကဲ့သို့သဘောတရားများ (ကော်ဖီလပ်ချိန်ခံစားတဲ့ Concept ကို) နှင့် Feskekorka (ငါး ဘုရားရှိခိုးကြောငျး) သူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ဂီတပွဲတော်သက်သေခံရန်သြဂုတ်လအတွင်းကဤမြို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြိုးစားပါ Way ကိုအထဲကအနောက်အဖြစ်လူသိများ. ဤအချိန်ကာလအတွင်းသွားရောက်မဖြစ်နိုင်ပါ? အဆိုပါမြို့အလိုတော် သို့ရာတွင်လှပတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့အားလုံးသင့်ရဲ့အာရုံတစ်ခုအပျြောအပါးအဖြစ်ရှိုး,
လက်ချောင်းကိုလျက်အစားအစာ, နှင့်သွက်လမ်းများ. ကထိပ်, တမြို့လုံးလှည့်ပတ်ရုမ်းမင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ညာဘက်ကိုသင်ရန်ပုံငွေများခရီးသွားလာပေါ်နှင့်အတူတူပင်မှာ save ဆိုလိုတာကသင်၏ခြေကိုအပေါ် အချိန်လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရယူထားသောပျော်မွေ့သည်ဤအံ့ဘွယ်သောမြို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်.
7. အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး – ကွဲ, ခရိုအေးရှား
ခရိုအေးရှားရှိ Split သည်သင်ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုအတွက်အမဲလိုက်နေသည်ဆိုပါကအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသည့်လှပသောနေရာများဖြစ်သည် Chilling မြေထဲ Vibe နှင့်အတူကမ်းရိုးတန်းမြို့စပ်လျဉ်း. ဒီမှာ Dalmatian အဘိဓါန်အစားအစာ ယင်းနှင့်အတူ coupled လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာ သင့်ရဲ့အာရုံခြော့နှင့်သင့်ဒူး ထောက်. ပေါ်တွင်သင်ရလိမ့်မယ်!
နောက်ထပ်, အဆိုပါ Kastelet ကမ်းခြေမှာလျှော့ပေါ့သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုသင်သက်သာရာနှငျ့သငျ refresh လိမ့်မယ်များမှာ အတွင်းကနေဖြစ်ခြင်း. သငျသညျဖြေအချို့အချိန်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးကူးတို့စီးယူနိုင်ပါသည် ဒီကနေ Hvar မှ, ထက်နည်းနှစ်နာရီမြို့မှတည်ရှိသောကျွန်းတစ်ကျွန်း. အလုံးစုံ, ကွဲ ကျိန်းသေပေးသောသင်တစ်ဦးပြည့်စုံအထုပ်ဖြစ်ပါသည် စူးစမ်းလေ့လာရမယ်!
ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကားအဘယ်သို့? ဤအငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး၏တဦးတည်းမှသင်၏နောက်ခရီးစဉ်စီစဉ် တစ်ဦးကရထား Save ဤအချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့ကြီးများတဝိုက်နှင့်သင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်, ခရီးသွားလာမင်္ဂလာ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
အကြှနျုပျ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုရညျအသှေးသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အွန်လိုင်းမှ startup ဖန်တီးရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှုခင်းနှင့်ဤလှုံ့ဆော်မှုသည်ငါ၌. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းမှာတော့, Rishab အကြီးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Manager ကိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါသည် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ